बुवाको मृत्युमा भावविह्वल भएका ज्योतीष हरिहर अधिकारीको हात एकछिन पनि छोडिनन् नीताले (भिडियो हेर्नुस्) – Sandesh Press
May 25, 2021 1279
काठमाडौ । फिल्म ‘शुभलभ’ का नायक तथा युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको बुवा रामबहादुर अधिकारीको सोमवार निधन भयो । उनी संक्रमित थिए । संक्रमित भएकाले स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार उनको पशुपतिमा अन्तिम संस्कार गरिएको थियो । अन्तिम संस्कारमा निश्चित ब्यक्तिहरु मात्र पुगेका थिए ।
सिनेकर्मी माझ युवा ज्योतिष हरिहर अधिकारीको राम्रै प्रभाव छ। थुप्रै नेपाली कलाकारले उनीसँग ज्योतिषिय सल्लाह लिने गर्छ। उनी आम ज्योतिष भन्दा फरक छन्। झट्ट् हेर्दा उनलाई एक आधुनिक युवाको स्वरूपमा देखिन्छ तर उनको पेसा ज्योतिषि हो। सिनेकर्मीसँग बाक्लै उठबस भएका हरिहर ज्योतिष पेसाबाट सिनेकर्ममा होमिएका हुन्। उनी ‘शुभ लभ’ नामक सिनेमाबाट नायकका रूपमा पर्दामा डेब्यू गरेका थिए ।
Prevगर्मी भएर तीन वर्षकी छोरी लिएर आँगनमा बसेकी थिइन् चन्द्रा, एकै छिनमा भयो दुवै जनाको मृत्यु
Nextचितवनको सनराइज स्कूलका प्रिन्सिपलको को’रोनाका कारण मृुु’त्यु, आमा र दिदीको पनि ज्या’न गयो
फेरि एक्कासी मुटुमा समस्या देखिएपछि मदनकृष्ण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना, यस्तो छ उनको स्वास्थ्य अबस्था
बस दुर्घटना : ४ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु, ४९ जना घाइते
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (1773)
बुवाको मृत्युमा भावविह्वल भएका ज्योतीष हरिहर अधिकारीको हात एकछिन पनि छोडिनन् नीताले (भिडियो हेर्नुस्) (1279)
यि चर्चित प्रहरी अधिकारीसँग विबाह गरिन् चर्चित अभिनेत्री आशा खड्काले (1188)